Wararkii ugu dambeeyey ee qarax ka dhacay Muqdisho - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee qarax ka dhacay Muqdisho
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu soo warramayaa in lala beegsaday gaari uu la socday sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga Soomaaliya oo xilligaas marayey wadada.
Sarkaalka la qarxiyey oo uu dhaawac soo gaaray ayaa waxaa magaciisa lagu sheegay Janeraal Maxamed Xaashi Guuleed, wuxuuna kasoo baxay xarunta taliska ee Villa Baydhabo.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxan ay ku dhinteen ugu yaraan saddex qof oo kala ah mid ka mid ah ilaalada sarkaalka la beegsaday, darawalkiisa iyo qof kale oo shacab ah, sida ay innoo xaqiijiyeen dad goobjoogayaal ah.
Qaraxa, kadib waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo muddo kooban hakiyey dhaq-dhaqaaqa wadadaas, walow markii dambe ay xaaladu ku so noqotay mid caadi ah.
Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi loo adeegsaday miinada.
Qaraxan ayaa qayb ka noqonaya falal ammaan darri oo maalmihii lasoo dhaafay siyaabo kala duwan uga dhacayey magaalada caasimada ah ee Muqdisho, xilli lagu jiro marxalad doorasho iyo xaalad adag oo kala guur ah.